घर - शब्दशिखा
अचेल | केएल पीडित
निबन्ध | जँड्याहा
सम्झनामा बेपत्ता योद्धा कमरेड पूर्ण पौडेल
पुर्खाका पाइला खोज्दै जाँदा
भर्चुअल लिटरेचर फेस्टिभल
November 12, 2014 adminकथा
(खेतको माया लाग्छ र त खेत मेरो हो भनिन्छ । तेरो हो भनिन्छ । हाम्रो हो भनिन्छ । किनकि खेत र मान्छेबीचको सम्बन्धको कुरा आदिम युगबाट सुरु भएको रे । जतिखेर मान्छेलाई भोक लाग्न थालेछ ।)
चरार साल धान रोपेको थियो । धानसँगै आलीमा भट्ट र मास रोपिएका थिए । पुतलीहरु घुमिरहन्थे । फट्याङ्ग्रा वरपर । आउँथे जान्थे । गड्यौलाहरु आलीको भित्र बाहिर गरिरहन्थे । गलगला खेल्ने केटाकेटीहरु लस्कर हुन्थे ।
र भन्थे बुढाबुढीहरु– ‘खेत भनेको खेत हो । खेत भयो भने बाँच्न पाइन्छ । र देख्न मिल्छ संसार । दुनियाँमा यही खेतको बालीले बाँचेको छ ।’
युवायुवतीहरु धानको बाला मुसार्दै पर–परसम्म पुग्थे । परसम्म पुगेर सुरिलो सुुसेली हाल्थे । अनि वरवर रमाउँदै आउँथे । धानको रङजस्तै पहेंलपुर । सुदूर भविष्यमा बाँच्ने जीवनकोे सुन्दर भ¥याङ बनाउँदै–बनाउँदै हिड्थे । प्रितको मिठो गीत गाउँथे । धानको छेको मारेर अङ्गालोमा कसिन्थे युवायुवतीहरु । खै ? कहाँ हराउँथे उनीहरु एकछिन । पछि गलगला खेल्ने केटाकेटीहरु उधुम मच्चाउँथे । चिच्चाउँथे । हल्ला गर्थे ।
‘फलानी दिदी र फलानो दाजुको– लभ प¥यो । लभ प¥यो ।’
अनि लाजले रातो मुख लगाएर आलीमा उभिन्थे अघि हराएका युवायुवतीहरु । र खुसीले ताली बजाउँथे केटाकेटीहरु । देख्ने जति बुढाबुढी गाली गर्थे केटाकेटीहरुलाई ।
‘किन बौलाउँछौ तिमेरु । तिमेरुको पनि त आउला नि दिन । यो उमेरमा नगाँसेर कहिले गाँस्लान् माया । बिचराहरुलाई किन खिज्याउँछौ तिमीरु । परपर गएर खेलन गलगला ।’
हल्ला गर्ने केटाकेटीहरु हेरेको हे¥यै हुन्थे । पुतलीहरु उडिरहेकै हुन्थे । युवायुवती मुस्कुराउँथे घोसो मुन्टो पारेर ।
यो चरार साल धान नकाट्दैको खेतको अन्तिम कहानी हो । धान काटिसकेपछि खेतको कहानी पनि सकियो । र अर्को कहानी सुरु भयो । किनकि त्यसपछि खेत बाँझो भयो ।
परार साल । एकदिनको कुरो । हरियो रङको डोजर बिहानै आयो । डोजर सरासर खेतमा पस्यो । एक बर्ष पुरानो बाँझो खेत उधिनी–उधिनी जोत्यो हरियो डोजरले । पुराना मास र भट्टका डाँठहरु पुरिए । धान फल्ने खेत पुरियो र अघिलो दिन साँझसम्म सेपा भंैसीले खाएको दुबो पुरियो । हेर्दाहेर्दै धेरै खेतको गरा एउटै भयो । केटाकेटीले खेल्ने खोपी पुरियो । कबड्डी खेलको रेखा पुरिए । हिजै खनेको भलिबलको कोर्ट पुरियो । अन्तमा, हरियो डोजरले बीच बीचमा बाटो बनायो । अनि गयो डोजर । रमाउँदै–रमाउँदै आफ्नो बाटो । पर–पर जाँदासम्म बूढाबूढीले छत्रे हात लगाइ लगाई हेरिरहे । केटाकेटी पछि–पछि दौड्दै थिए । हरियो डोजरले बस्नु भनेर हात हल्लाएन । पछि फर्किएन । सट्टामा दौडि–दौडि भाग्यो । केटाकेटीहरु हल्लाइरहे हात ।
हरियो डोजर देखिन छोड्यो । अनि वरिपरि हल्ला मच्चियो । नगरपालिकाको हाकिमले खेत मासेर घडेरी बनायो । धान छोडेर ढुङ्गा रोप्ने भयो ।
यसरी खेत घडेरी बनेको हो ।
(यो खेतको दुःख त बयान हो । र साह्रै दुःख त छ बयान । पलासको फूलजस्तै । धेरै कालो–कालो । कुकुरडाइनाको काँडाजस्तै प्रयोगहीन । तर धेरै विषालु ।
यही बेला देश । लाग्छ पूरै–पूरै भ्रष्टहरुको हातमा चलिरहेछ । तपाई पट्याउनुस् या जे गर्नुस् । तर सुविधाको नाममा । देशभर प्रत्येक दिन करोडौंको बदमासी बिलहरु थोपरिरहेको सत्य कुरा हो । डरलाग्दो त यो कुरा छ कि । व्यक्तिगत प्रयोगका लागि किनिने । दाल चामल, नुन भुटुन, कपडा, जुत्ता, चप्पल, लिपिष्टिक, क्लीप र सबभन्दा बढी एनटिसी र एनसेलका रिचार्ज कार्डहरु प्रयोग गरिएका बिलहरु अग्रस्थानमा रहेका छन् । तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने नमुनाको रुपमा यहाँ पेश गरेको छु एउटा बिल । जहाँ मेरो देशको पूरै–पूरै मिठो सुगन्ध आउँछ । बिल यस्तो छ–
सगरमाथा किराना पसल
एनसेल रु. एक सय जम्मा खरिद रु. १२०/–
एनटिसी रु. एक सय जम्मा खरिद रु. ११५/–
यहीताका घडेरीको कालाबजारी पनि सुरु भयो । र कुरा के पनि बुझनुस् भने नातावाद–कृपावाद । तेरो–मेरो । चिया । कमिशन । चम्चे । आफ्नो–बिरानो । बलात्कार आदि सम्बन्धले खुब महत्व पायो यही समय ।)
पोहरसाल । दलालले भकाभक घडेरी बेच्यो । घडेरी किन्नेहरु यही देशका नागरिक थिए । तर को हुन् ? कहाँका हुन् ? अथवा कसरी किन्ने भए घडेरी भन्नेबारे कसैलाई केही पत्तो भएन । वरिपरिका छिमेकी हल्लाचाहिं यस्तो गर्थे । यस्तो भन्थे ।
‘उँभो–उँभो शेसपट्टिका सेशीहरु ।
उदो–उदो तराइतिरका कालाहरु ।’
उनीहरुले घडेरी किने रे । अब घर बनाउँछन् रे ।
(यो दुनियाँको चर्चित नियम के रहेछ भने । सोझा साझाहरु । इमान्दारीहरु । घुसपिस । चिया चम्चा । तलमाथि । आफ्नो बिरानो नभएका । वा त आदिमकालदेखि हेपिएकाहरु । हेपिएरै बस्नैपर्छ भन्ने मान्यता राख्दोरहेछ । यिनीहरुमाथि हेपाहा शासन लाउन पाए आफूलाई महान मान्दो रहेछ सरकार । अन्याय अत्याचार वा राज्यले, प्रशासनले दलालले, कर्मचारीले यिनीमाथि नै थिचोमिचो गर्ने उद्देश्य हुँदोरहेछ । हैन भने यी कुराहरु किन हुन्छ बारबार ।)
टुक्रा–टुक्रा भएर घडेरी सबै बिक्री भयो । खेत घडेरीमा बिक्यो । यसरी पोहरसाल पनि सकियो । दलाल र नगरपालिकाको हाकिमले दोब्बर मूल्य उठाए घडेरीबाट । पोहरसालको कहानी यसरी नै सकियो । कहानी यही भयो ।
घडेरीको एउटा मालिक आयो । मान्छेसँग बोल्नै डराउने ऊ । घर बनाउँछु भन्न थाल्यो छरछिमेकमा । छरछिमेकले बाटो पहिलाइदिए । सुरुमा नगरपालिका धायो घर नक्साका लागि । अमिन आयो । नापजाँच भो घडेरी । त्यसपछि कित्ताकाट । अमिनले नक्साघरमा पठायो उसलाई । घरको आधुनिक नक्सा बनाउन । नक्साघरले भनिदियो– चार महिनापछि आउनुस् । त्यतिखेरसम्म तयार हुन्छ नक्सा । उसले पत्यायो । विश्वास ग¥यो र चार महिनापछि नक्सा लिन आउने गरेर उ हिड्यो आफ्नो बाटो । तर कहाँ जान पाउनु उसले उसको बाटो । नक्साघर बाहिर घडेरी नापछेक गर्ने अमिन भेटियो । अमिनले बाटो छेक्यो । हात समायो । र सोध्यो ।
‘नक्सा बन्ने भो ?’
‘बन्ने भो ।’ उसले उत्तर दियो ।
‘कहिले ?’ अमिन हाँस्यो ।
‘चार महिनापछि ।’ उसले बोल्यो ।
अमिन नमिठो गरी हाँस्यो । उसको हात पहिलेभन्दा जोड गरेर समायो । र चिया पसलतिर लग्यो उसलाई ।
उनीहरु चिया पसलको गोप्य रुममा पसे । बीस÷बाइस मिनेटपछि उनीहरु अघिकै बाटो निस्किए । उसले चियाको पैसा दियो ।
उ फेरि नक्साघरभित्र छि¥यो । यसपालि चार दिनपछि घरको नक्सा बन्ने खबरले उ दङ्ग भयो । घर फर्कदा अमिनले भनेमुताबिक अमिनसँग भेट गरेर गयो ।
चार दिनपछि घरको नक्सा पायो उसले । अब नक्सा पासको कामपछि घर बन्न सुरु हुनेछ । अमिनले भनेकै थियो । चार दिनपछि मलाई भेट्नु । म गरिदिउँला काम । अमिन बोलेको थियो ।
उसले हातमा घरको नक्सा समाउँदै खोज्दै हिड्यो अमिन । चिया पसलमै भेटियो अमिन । आज पनि भित्र पसे दुबै । गोप्यरुममा छिरे दुबै । बीस/बाइस मिनेटमा बाहिर आए उनीहरु । र हिडे हाकिम भएतिर । सजिलै भनिदियो हाकिमले ।
‘भोलिबाट बनाउन सुरु गर घर ।’
उ थोरै खुसीसाथ फर्कियो आफ्नो बाटो । तर उसलाई बाटामा घोचिरहयो थिम्बरको काँडाले च्वाँस्स च्वाँस्स । मुटु पोलिरह्यो उसको भतभत ।
भोलिपल्ट , अमिनले पहिल्यै भनेको थियो । घर बनाउने ठेकेदार, हेड मिस्त्री, लेबर सबै हामी खोजिदिन्छौं । र यो पनि सहयोग गर्छौं कि, घर बनाउँदा आवश्यक सरसामान किन्ने पसल पनि खोजिदिन्छौं ।
त्यसैले उनीहरुले नै खोजेको ठेकदार आयो भोलिपल्ट । हरहिसाब सब भयो । ठेक्का लिएको बैना बुझ्यो । कागज लेख्यो । व्यापारी पनि आयो । सरसामानको कुरा भयो ।
भोलिको दिनबाट घरको जग खन्ने पक्का भयो ।
उसलाई चाहिने सरसामानको ऐंचोपैंचो सब मिलाउन आदेश भयो । र हिड्यो ठेकेदार । गयो व्यापारी । ऊ घर बन्ने घडेरीमाथि एक्लै उभिरह्यो ।
बच्चा पाउने आइमाई
यो घर बनाउने एउटा लेबर । बच्चा पाउने आइमाई पनि हो । उसले दुई महिनापछि जन्म दिनेछे बच्चाको । सात मासको बच्चा पेटमा बोकेर उ इट्टा ओसार्थी । यो उसको मजबुरी हो । उसले दुखेसो पोखिरहन्थी बेला–बेला ।
‘गरिब हुनुको घाटा यही हो यो दुनियाँमा । न राम्रो खान मिल्छ । न त लाउन मिल्छ । शरीरलाई चैन हुँदैन् । यो गरिबको नागरिकता हो । सबभन्दा मुटु दुख्ने कुरा । गरिबको मूल्य नै छैन । यो अपमान हो ।’
र, बच्चा जन्माउने आइमाईको सबभन्दा ठूलो रहर ।
‘यसरी बाँच्नुभन्दा मर्न निको हो ।’
छेउमा छोरो भोक लाग्यो भन्थ्यो । छोरी के खाने भन्थी । नसुनेको भेषमा उ कामतिर लाग्थी । खै मनमा कसलाई हो गाली गरिरहन्थी बरु ।
उ इट्टा ओसारिरहन्थी । छोराछोरी रोइरन्थे ।
जरुरी कुरा यहाँ छ
जरुरी कुरा के छ भने, बच्चा पाउने आइमाईको छोराको अनुहार हाकिमसँग मिल्छ । छोरीको ठेकेदारसित मिल्छ । पेटको चाहिं अमिनको भन्ने हल्ला छ । आइमाईको न घर छ न त श्रीमान् । यसको न्याय कहाँ मिल्छ हँ ? कसले दिन्छ हँ ?
घर बन्यो । ऊ घरको मालिक भयो । घरमा रङ लाग्यो । घर राम्रो देखियो । मान्छेहरुले ‘राम्रो घर बन्यो’ भने । मेचमानीपछि कामदारहरु तितरबितर भए । तर घर मालिक खुसी देखिएन । घरि बाहिर गथ्र्यो । घरि भित्र गथ्र्यो । र ‘मा’ गाली दिन्थ्यो हाकिमलाई । ठेकेदारलाई । अमिनलाई । र सराप्थ्यो सरकारलाई । उसले कसैलाई भन्न चाहेन केही उसको मनको कुरा । केही समय । उसलाई कुकुरडाइनाको काँडाले घोचिरह्यो भित्र–भित्र । तर एकदिन उसले हल्ला ग¥यो छिमेकभरि । बोल्यो जताततै ।
‘मेरो घर मेरो नाममा छैन ।
मेरो घडेरी मेरो नाममा छैन ।’
(नागरिकता नम्बर ४५८९१ को नेपाली नागरिकको पीडा हो यो । कुबेतको तेलखानीमा दुःख गरेर जोरेको सम्पत्ति । उसको पनि कत्रो रहर हुँदो हो । मेरो नाममा घर छ । घडेरी छ भन्न । परिवारसँग रमाउँदै बस्न । तर अनपढ सोझो यो नागरिकको रहर खोस्ने । चाहना खोस्ने । साँच्चिकै को–को मान्छे होलान् ?! सरकार को यो घरको मालिक ?! चिन्ने रहर छ मेरो पनि । कारण, म पनि यही देशको एउटा नागरिक हुँ नागरिकता नं. ४५८९१ जस्तै ।)
कोपिलाको ‘हमार संस्कृति’
सूचनाको त्यो भोक !
कथा | छोराको खोजीमा
कथा | पुनर्मिलन–पुनःबिछोड
कथा | सुनको मृग
कविता । मजदूर र मजबुरी
सुकुम शर्माको हिमालमुनिको गाउँ
स्त्रीहरु घर फर्किन्छन्
शकुन्तला जोशीका तीन कविता
नयाँ सुरुवातको समय
विष्णु नागरका तीन कविताहरु
अमर गिरीका चार कविता
सेल्फी संस्कृतिः पूँजीवादी युगमा अलगाव एवं व्यक्तिवादको चरम अभिव्यक्ति
भाग्यभरोसाले भविष्य बन्दैन
कम बोल्ने कवि